Luulyo | 2012 | WEEJIDOW
Archive for Luulyo, 2012
War deg deg ah: Diyaarad nooca wax basaasta ah oo xalay ku dul wareegaysay Madaarka Hargeysa iyo Buurta Naasa Hablood
Luulyo 31, 2012
Hargeysa(WAAJIDPRESS) Diyaarad aan Muuqaalkeeda la arkayn, laakiin Guuxeedu dawakhiyay dadka degan jiida u dhaxaysa Madaarka Hargeysa iyo Buuraha Naasa Hablood ayaa xalay Abaara tobankii Habeenimo ilaa iyo laba iyo tobankii Habeenimo Dul wareegaysay.
Si rasmi ah looma oga Diyaaradhaasi nooca ay tahay iyo waxa ay raad-guraysay toona, hase yeeshee sida looga bartay diyaaradaha noocan oo kale ah waxay aakhirka noqdaan kuwa ay adeegsadaan Ciidamadda Sirdoonka Maraykanka iyo kuwa Ingiriisku.
Mid ka mid ah dadkii xalay la socday diyaaradaasi dhaq dhaqaaqeeda oo ku sugnaa Madaarka Hargeysa ayaa Saafifilms u sheegay inay ku jihaysnayd oo kaliya labadaasi goobood iyo inta u dhaxaysa, waxaanu xusay inay xalay oo dhan dhagaysanayeen Guuxeeda balse aanay arkaynin.
“ waxaan joogaa Madaarka Hargeysa waxa nagu dul-wareegaya diyaarad aanaan arkayn oo guuxeedu xoog badan yahay. Marna xaga Naasa Hablood bay u kacaysaa, marna xaga Madaarkay ku soo jiiraynaysaa. Markaa ma garanayno waxay tahaye waan eegaynaa goorta ay naga faaruqdo” sidaas waxa yidhi nin Telefoon nagula soo xidhiidhay oo madaarka hargaysa ku sugnaa wahtigaa.
Daawo Warbixin: Dilkii loo-geystay Allaha u naxariistee Majaajaliiste Marshaale
Rag dhagar qabayaal ah ayaa waxay dileen Allaha u naxariistee Cabdi Jeylaano Malaaq “Marshaale”, kaasoo aan shaqo iyo shaqul toona ku laheyn dhinacyada isu haaya siyaasadda murugsan ee dalka ka jirta.
Xilli aan si cad ah loo-ogeyn cidii ka dambeysay dilkii bareerka ahaa ee lagula kacay Marshaale, ayaa waxaa hadana jira astaamo muujinaaya in dilkiisa ay geysteen, kooxo ka mid ah dhinacyada isu haaya siyaasadda dalka.
Ragga dilka geystay oo tiradoodu lagu sheegay ilaa laba nin, kuna hubeysnaa bistoolado, ayaa waxaa la-sheegay inay lahaayeen astaamo muujinaaya inay ka tirsan yihiin Xoogaga Shabaab, waxaana lagu gartay qaabka ay dilka u fuliyaan.
Ciidamadda Amniyaadka ee Al Shabaab gaar ahaan kuwo Madax Jabiska loo-yaqaano, ayaa waxaa lagu yaqaanaa in kolka ay dilal fulinayaan inay dadka ka toogtaan madaxa, feeraha iyo caloosha, isla-markaana dambiilayaasha ayaa waxay muujiyeen inay ka tirsan yihiin dhinaca Shabaab.
Sida cad kolka ay dhibaato geystaan dambiila-yaasha ayaa waxaa jira raadad muuqda oo ay reebaan, isla-markaana dilka lagula kacay Cabdi Jeylaano Malaaq “Marshaale”, ayaa waxay muujineysaa inay geysteen Xoogaga Shabaab.
Taliyaha Saldhiga Degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir ee Dowladda Kmg ah ee Soomaaliya Mudane Axmed Xuseen Axmed, ayaa wuxuu sheegay inaysan cidina wax iska weydineyn in dilka Marshaale ay geysatay sida uu yiri Al Shabaab.
Waxaa jira hanjabaado xoog leh oo muddooyinkii ugu dambeysay Marshaale uga imaaneysay dhinaca Al Shabaab, iyagoona ugu hanjabaayay inaysan wax dhib badan ku qaadaneyn dilkiisa, haddii uu faraha kala bixi waayo ka qeyb-galka xafladaha ay Dowladdu ku dhigto Villa Somalia, oo uu ka midka ahaa Hoboladii iyo Majaajaliiste-yaashii lagu soo casuumaayay.
Dilka bareerka ah ee loo-geystay Majaajaliistaha weyn ee Cabdi Jeylaano Malaaq “Marshaale”, ayaa waxaa si weyn uga wada naxay dadka Soomaaliyeed, ee dal iyo dibadba ku kala sugan, oo iyagu kala socday Telefishinka Universal, oo uu ka hawl-geli jiray.
Saddexda Masuul ee Ugu Sareysa DKMG Soomaaliya oo Looga Yeeray Nairobi Iyo Saraakiil Mareykan ah oo Ku Sugaya (Xog Hordhac ah)
Muqdisho (WAAJIDPRESS): Madaxda DKMG Soomaaliya ayaa saacadaha soo socda u dhoofi doona magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya kadib markii ay farriin uga timid safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi, sida Waajidpress ay ka heshay ilo wareed ku dhow Villa Soomaaliya oo aan rabin in la magacaabo.
WAR DEG DEG AH:- Dagaal ka qarxay degmada Garbahaareey iyo guryo badan oo dab ka holcaaya.
Dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dowladda KMG ee Soomaaliya iyo kuwa Xarakada Al-shabaab ayaa caawa waxa uu ka holcayaa degmada Garbahaareey ee gobalka Gedo, iyadoona wararka ay sheegayaan in dagaalkaasi ay ku gubanaayaan guryo dad shacab ah ay leeyihiin.
Dagaalka ayaa qarxay ka dib markii Xarakada Al-shabaab ay weerar lama filaan ah ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda KMG ee Soomaaliya ay ku leeyihiin degmadaasi, waxaana xaaladda ay tahay mid aad u qasan.
Ilaa iyo haatan lama xaqiijin karo qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaan, laakiinse dadka ku dhaqan degmada Garbahaareey ayaa la sheegayaa inay bilaabeen barakac habeen madoow ah maadaama madaafiicda ay gubayaan guryahooda.
Dhinacyada dagaalamaaya ayaan isku daynay inaynu xiriir la sameeyno, hase yeeshee waa ay inoo suurta gali weeysay dagaalka oo socda iyo xilliga oo habeen ah awgeed.
War deg deg ah: Muqdisho: Majaajiliiste Marshaale oo lagu diley Muqdisho
Allaha u naxariistee Majaajiliistaha Weeyn ee Soomaaliya, Cabdi Jeeylaani Malaaq (Marshaale) ayaa kooxo hubeeysani ay ku toogteen Magaalada Muqdisho.
Kooxo hubeeysan oo sedex ah ayaa gurigiisa ku weerarey Marshaale iyaga oo xabado kaga dhiftey Madaxa iyo Gacmaha, iyadoo durba ay baxsadeen kooxdii geeysatey falkaas wuxuushnimada ah.
Durbadiiba dhaawaca Marshaale ayaa loola cararey Isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho, nasiib darro markii danbe wuuw geeriyodey.
Allaha u naxariistee Marshaale waxa uu kamid ahaa Majaajiliistayaasha ugu caansan dalka Soomaaliya, iyadoo uu qeeyb weyn kulahaa inta badan Riwaayadaha Dalka iyo dibadda laga daawado ee ku baxa Afka Soomaaliga.
Cabdi Jeylaani Marshaale Malaaq oo u shaqeynayay idaacadda Kulmiye iyo telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho ayaa caan ku ahaa sameynta ruwaayadaha madaddaallada ah.
Shariif Xassan oo sheegey in Digil IYO Mirifle aysan isku Sharixi doonin GUDOOMIYE BAARLAMAANKA
Shariif Xasan sheekh Aadan ayaa la sheegayaa isaga oo isku qaba kalsooni aan caadi ahayn uu sheegay in siyaasiyiinta ka soo jeeda Beelaha Digil iyo Mirifle oo aan isaga ku siyaasadda aheyn aysan soo geli doonin Baarlamaanka Cusub.
Si kastaba ha ahaatee Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ilaa iyo hadda wuxuu ahaa ninka kaliya ee siyaasadda kusoo guuleysanayey ilaa iyo intii uusoo galay siyaasadda, iskudaygaan ugu danbeeya oo uu ku doonayo inuu ku noqdo Madaxweynanimada dalka Soomaaliya ayaan la ogeyn sida uu ugu guuleysan doono maadaama awood qeysiga dalka ay inta badan beesha Digil iyo Mirifle qaadan jirtay Afhayeenka Baarlamaanka.
Shariif Xasan ayaa sheegay in Beesha Digil iyo Mirifle aysan isku soo sharixi doonin gudoonka Baarlamaanka isaga oo la sheegay inuu diyaarsaday laba nin oo kasoo kala jeeda Beelaha Hawiye iyo Daarood labadaas oo uu midkood doonayo inuu ku soo baxo Gudoonka Baarlamaanka, labadaas nin ayaa midkood lagu Magacaabaa Mustaf Dhuxuloow oo ka soo jeeda beesha Murusade Hawiye oo sida la shegay qaraabo la ah mid kamid ah xaasaska Shariif Xasan, Mustaf Dhuxuloow ayaa hadda u ah Shariif Xasan Sheekh Aadan mid kamid ah xogheyntiisa gaarka ah.
DEG DEG: Haweenkii Ku Jiray Shirka Ansixinta Dastuurka oo Goordhow Isaga Baxay
Muqdisho (WAAJIDPRESS): Ergadii haweenka ahaa ee ka qeybgalay shirka ansixinta dastuurka ee ka socday hoolka shirarka ee xarunta Gen Kaahiye [Ex Iskool Boolisiya] ee magaalada Muqdisho ayaa goordhow isaga baxay shirka kadib markii sida ay sheegeen cabasho ay gudbiyeen laga dhageysan waayey.
Al Shabaab oo Jowhar ka Rartay Idaacaddii Al Andulus
Wararka naga soo gaaraaya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa soo sheegaaya in Idaacadda Al Andulus ee ku hadli afka Al shbaaab laga raray magaalada.
Magaalada Jowhar ee Xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa horay ugu yiilay Idaacada lagu magac daray magaalada Jowhar ,wallow markii dambe Alshabaab magaalada ay keeneen Idaacadda ku hadasha Afkooda ee Andalus.
Idaacadda Andalus ayaa habeen hore Saqdii dhexe waxaa laga qaaday qalabkeeda xarunta Shabeelaha Dhexe.
Ilaa iyo hadda lama oga halka Alshabaab ay u qaadeen Qalabka Idaacadda Andalus,laakiin wararka ayaa sheegaya in qalabka ay la aadeen Gobolka Hiiraan.
Idaacadda Andalus ayaa mudooyinkii dambe ka shaqeynaysay magaalada Jowhar ee xarunta Gobolka Shabeelaha Dhexe.
Dadka Degmada Jowhar ayaa sheegay in muddo 48 saac ah aysan maqlin Idaacadda Andalus oo ku hadasha Afka Alshabaab.
Qaar ka mid tirsan Alshabaab oo magacooda qariyay sababo jiro Awgeed ayaa sheegay in qalabka Idaacada loo furay cabsi Alshabaab ay ka qabaan in degmada lagala wareego.
Alshabaab ayaa Idaacadda Andalus waxay xarumo ay leedahay ka fureen gobolo dhowr ah oo ay maamulaan.
Xarunta Idaacadda ay ku laheyd magaalada Jowhar ayaa waxaa laga sii deyn jiray Warbixinada ku aadan guulaha ay sheegtaan Alshabaab.
Askar lagu dilay Muqdisho iyo hubkii ay wateen oo laga qaatay
kooxo hubaysan ayaa agagaarka masaajidka Nasrudiin ee xaafada Baar Ubax waxa ay ku dileen labio askar oo ka tirsan ciidamada dowladda.
Dilkan ayaa ka dambeeyay kadib markii sida la sheegay labada nin ee ku hubeesnaa biskooladaha ay si gaadmo ah ku toogteen labadan askari xilli ay marayeen meel ku dhaw masaajidka Nasrudiin.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in xilliga askartan la dilayay ay aheyd aroornimadii saaka saacada markii ay aheyd 7:30 iyadoo kooxihii falka dilka ah geestay ay durba goobta isaga baxsadeen.
Kooxaha ku hubeysan biskooladaha ee fuliyay dilka ayaa la sheegay inay si tartiib ay ku qaateen labadii qori oo ay wateen askartaasi islamarkaana ay la tageen.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in askarta la dilay ay kusii jeedeen wadada warshadaha halkaasi oo ciidamo ka tirsan dowladda KMG soomaaliya ay fariisimo ku leeyihiin.
Dilka kadib ayaa waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda KMG soomaaliya kuwaasi oo sameeyay howlgal baaritaan ah inkastoo aysan jirin cid ay gacanta kusoo dhigeen.
Meydka labada askari ayaa lasoo wariyay in goobta ay ka qaateen ciidamada dowladda kuwaasi oo ula dhaqaaqay dhanka warshada.
Dadka deegaanka aya aarintani waxa ay ku noqotay mid fajac ah maadaamada xilliga falkan dilka ah uu dhacayay ay aheyd xilli aroor ah taasina ay keentay cabsi xoog leh oo dadka ay dareemeen.
Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya ayaa falal dilal gaadmo ah waxaa loogu geesta magaalada Muqdisho.
WAR DEG DEG AH:- Ciidamada Kenya iyo kuwa dowladda KMG oo kaabiga ku haaya degmada Baardheere ee gobalka Gedo.
Wararka haatan naga soo gaaraya degmada Baardheere ee gobalka Gedo ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda KMG ee Soomaaliya oo garabsanaaya kuwa Kenya ay ku dhaw yihiin degmadaasi ka dib markii saakay waabarigii dhanka degmadaasi ay u ruqaansadeen.
Ciidamadaan ayaa ah kuwo aad u badan islamarkaana wata hub aad u xoogan iyo Taangiyada dagaalka, waxaana ciidamadaan ay ka amba baxeen deegaano aan sidaas uga fogeen degmada Baardheere oo maalmahaanba ay ku sugnaayeen.
Dhanka kale ciidamada Xarakada Al-shabaab ayaa lasoo sheegayaa inay galeen diyaar garoow aad u xoogan oo ay ku doonayaan inay isaga difaacaan ciidamadaan duulaanka kusoo ah, waxaana la sheegayaa inay diyaariyeen ciidamo aad u badan oo duulaankaan ka hortaga.
Dadka ku dhaqan degmada Baardheere ayaa dhankooda iyana waxay yihiin kuwo wal wal iyo cabsi daran ku jira, iyaga oo ka cabsanayaa in magaalada dhexdeeda dagaalo ay ka dhacaan, islamarkaana ay dhibaato kasoo gaarto dagaaladaasi.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Luulyo, 2012.